Ampidino Notepad3 3.18 ho an'ny Windows
Sehatra: Windows Version: 3.18 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (2.00 MB)
Ampidino Notepad3, Notepad3 dia tonian-dahatsoratra izay ahafahanao manoratra kaody aminny fitaovana Windows. Notepad3, izay novolavolaina nanohitra ny Notepad, izay tsy niova sy nanavao mihitsy tao anatinny 20 taona taminny tantaranny Windows ary natao hampiasainireo mpanamboatra lozisialy, dia afaka manohana fiteny maro. fotoana mitovy.
Tonian-dahatsoratra an-tsoratra avy any Scintilla ihany koa. Noho io antony io dia tsy dia tadidy kely akory no ampiasainy nefa matanjaka tsara hanaovana ny ankamaroanny asa fandaharana. Ny Notepad3 dia misy fiasa toy ny fiovam-po aminny tarehin-tsoratra aminny endrika isan-karazany (ASCII, UTF-8 ary UTF-16), fanodinana kaody vaovao (DOS (CR / SA) fanodinana kaody, fampifangaroana ny zoro, fampidirana ho azy ary teny famaranana.Raha liana aminny Notepad3 ianao, izay mahomby aminny ankapobeny ary tsy mankaleo ny solosaina, dia mamporisika anao aho hampidina azy.
Fiteny notohananny Notepad3
Haben'ny rakitra: 2.00 MB
Fanavaozana farany: 11-04-2021